Sida loo Copy iPhone Notes in PC / Mac (ay ka mid yihiin iPhone 5 / 4s)
> Resource > Mac > Sida loo Copy iPhone Notes in PC / Mac
Hab kasta oo aad nuqulka qoraalada iPhone in PC ama Mac?
The app iPhone ee Notes runtii waa hab Caawo ee nagu qor Deymaha maqan, sameeyaan liisaska ama fikrado random xitaa archive waqti kasta ama meel kasta. Si kastaba ha ahaatee, waa hab noo si ay u gudbiyaan qoraalada iPhone in PC ama Mac, si aannu ka akhrisan kartaa ama iyaga iyo sidoo maamuli boggayaga computer? Halkan, aynu wada hadla wadajir iyo ogaato hab.
Sida aan ognahay, Lugood kaa caawin karaan in ay dib u kor qoraalada iPhone kombiyuutarka, laakiin ma ogola in aad si ay u helaan ama u akhri on your computer. Sidaas, waxaan qiyaasi karnaa sidan: Sidee ku saabsan dib iPhone uyiri la Lugood iyo markaas waxa extact on PC ama Mac? Taasi waa dhab. Waa hagaag, hab sarakicidda kowaad ee maskaxdeena waa in ay si toos ah u gudbiyaan qoraalada ka iPhone in computer. Haddii aad leedahay sida loo baahan yahay, akhri on oo aad ku baran sida loo sameeyo in labada dhinacba.
Laba siyaabood si ay u gudbiyaan qoraalada ka iPhone in computer
First of dhan, waxaad u baahan tahay si aad u hesho qoraalada iPhone ah nuqul qalab, iyadoo aan loo eegayn aad isticmaalayso jidkii aad nuqulka qoraalada iPhone aad. Ma aha in mid ka mid ah? Halkan waa talo: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (dadka isticmaala Windows). Labada barnaamijyo ka caawin kara in aad nuqulka qoraalada iPhone si Mac ama PC in 2 qasabno fudud, oo waxaad ka akhrisan kartaa, edit ama daabacato qoraalo aad u faa'iido badan ee aad rabto.
Download version maxkamad free hoose si aad nuqulka qoraalada iPhone in computer. Dooro version saxda ah iyo waxa ay isku dayaan in si bilaash ah!
Qaybta 1aad: Si toos ah u gudbiyaan iPhone qoraal PC
Qeybta 2: iPhone Copy 5 / 4s qoraalo si Mac ama PC
Qeybta 1: Saxiixa iPhone qoraalada in PC
Talaabada 1: Isku aad iPhone in kombiyuutarka
Next, aynu isku dayi version Windows ee Wondershare Dr.Fone ee macruufka wada.
Ka dib markii ay soo degsado iyo ku rakibidda Wondershare Dr.Fone ee macruufka, waxa maamula on your computer iyo xiriiriyaan iPhone in kombiyuutarka. Waxaad heli doontaa suuqa kala ah sida soo socota.
Wixii iPhone 4 iyo iPhone 3GS:
Wixii iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 5 ama iPhone 4s
Talaabada 2: baarista iPhone
Ka hor inta qoraalada iPhone wareejiyo PC, aad u baahan tahay si aad u hesho hab iskaanka aad iPhone 4 ama iPhone 3GS markii ugu horraysay oo ay sida ay tallaabooyinka soo socda:
Hay iPhone oo guji "Start" button.
Press "Power" iyo "Home" badhamada isku mar muddo 10 ilbiriqsi.
10 ilbiriqsi ka dib, sii daayo "Power" button, Laakiinse ay xajiyaan haysta "Home" 10 ilbiriqsi oo kale.
Ka dib marka aad si guul leh ku soo galaan hab iskaanka ah, Dr.Fone si toos ah u bilaabi doonto aad ka baareyso iPhone xogta ku yaal.
Haddii aad isticmaasho iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 5 ama iPhone 4s, waxaad si toos ah guji kartaa "Start Scan" button on suuqa kala bilowday in ay iskaan qalab aad.
Talaabada 3: Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo wareejiyo iPhone qoraal PC
Marka sawirka dhameystiray, dhammaan xogta ku saabsan iPhone la marsiiyey doonaa oo ku qoran qaybaha. Guji "Xusuusaha", waxaad ku eegaan karin xogta oo dhan faahfaahsan ka hor inta iyaga lagu wareejiyo si aad u computer. Markaas, calaamad iyo guji "Ladnaansho", waxaad badbaadin kartaa xusuusqor kuu kombiyuutarka sida file HTML ah.
Waxyaabaha aad ogaanaysid Waa waa in qoraalada halkan ma aha oo kaliya kuwa aad iPhone hadda, laakiin sidoo kale kuwa dhowaan la tirtiro. Haddii aad rabto in aad si gooni gooni ah fiiri, simbiriirixan badhanka hoose si ay "u soo bandhigaan waxyaabaha tirtiray oo kaliya".
Qeybta 2: qoraalada Nuqul ka iPhone 6S Plus / iPhone6S / 6 Plus / 6 / 5C / 5S / 5 / 4s si Mac ama PC
No arrinta oo macruufka (macruufka 9 ka mid ah) qalab aad isticmaalayso, waxaad isticmaali kartaa sidan in aad nuqulka qoraalada ka qalab si aad u computer ah, gaar ahaan marka qalab aad uma waa dhow dahay. Qabatinka sidan, waxaad u baahan tahay in ay isticmaalaan Lugood lagu rakibay on your computer hore.
Talaabada 1: nidaameed / Back aad iPhone la Lugood
First of dhan, xiriiriyaan iPhone la computer iyo ordi Lugood on your computer. Marka aad u hagaagsan iPhone la Lugood, hana u oggolaan in ay sir file gurmad ah, talaabooyinka soo socda si habsami leh socday.
Talaabada 2: Orod Wondershare Data Recovery for iTunes ama Wondershare Dr.Fone
Ka dib markii ay talaabada 1, barkinta aad iPhone oo ay maamulaan Wondershare Dr.Fone ee macruufka on your computer, kaliya dooran version saxda ah ee computer. Next, aynu qaadan version Mac ah tusaale ahaan.
Marka aad ordi barnaamijka, faylka raad raac ah oo aad iPhone waxaa laga heli doonaa oo soo bandhigay suuqa kala hoose. Waxaa Dooro oo guji "Start Scan" Macdan ka kooban waxaa ku.
Talaabada 3: Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh oo nuqul ka iPhone qoraal your computer
Scan ka dib, waxaad heli doontaa liiska xogta aad iPhone lahayn. Wixii qoraalo, doortaan "Xusuusaha" category. Waxaad ku eegaan karaan macluumaadka oo dhan waxaa ka mid ah. Calaameeyey oo guji "Ladnaansho", waxaad iyaga ku badbaadin karaan on your computer sida file HTML ah, kaas oo ah kulan saaxiibtinimo oo ay ku akhristaan ​​ama print.
AHV Video Editor for Mac: Video ayeey Tool u Mac (Mountain Libaaxa ka mid ah)